Hello Nepal News » बार्सिलोना ला लिगा जित्न तुफानी वेगमा उत्रियो : तर …….
बार्सिलोना ला लिगा जित्न तुफानी वेगमा उत्रियो : तर …….
स्पेनिस ला लिगा फुटबलको जारी सिजन २०२०–२१ अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा उपाधि होड पेचिलो बन्ने देखिएको छ । लिगका बलिया टोलीहरू एथ्लेटिको मड्रिड, रियल मड्रिड र बार्सिलोना अहिले टप–३ मा छन् । ताजा अवस्थामा एथ्लेटिको ४ अंकको अग्रतासहित उपाधि होडमा सबैभन्दा अघि छन् । तर, बार्सिलोना र रियलले उसलाई नजिकैबाट पछ्याइरहेका छन् । कुनैबेला शीर्ष स्थानमा १३ अंकसम्मको अग्रता पाएको एथ्लेटिकोले त्यसलाई बचाउन नसक्दा अहिले त्यो घटेर ४ मा आइपुगेको छ । यता, कुनैबेला लिगमा निकै खराब अवस्थामा रहेको बार्सिलोना अहिले दोस्रो स्थानमा उक्लिसकेको छ । र, यी दुवैलाई रियल मड्रिडलाई पछ्याइरहेको छ ।
अहिले एथ्लेटिकोलाई बार्सिलोनाले दबाब बनाइरहेको छ । हालको अवस्थामा एथ्लेटिको दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाभन्दा ४ र तेस्रो स्थानको रियल मड्रिडभन्दा ६ अंकले अघि रहेको छ । यता, दोस्रो स्थानको बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीच भने मात्रै २ अंकको अग्रता रहेको छ । लिगमा अब अन्तिम १० खेल मात्रै बाँकी छन् । यी खेलमध्ये बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडले एक खेल खेल्न बाँकी छ भने बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीच पनि एक क्लासिको भिडन्त हुन बाँकी नै छ । यो सिजन दुईटै मड्रिड डर्बी भने भइसकेका छन् । तसर्थ, लिगका १० खेलमध्ये तुलनात्मक रूपमा बार्सिलोनाका कठिन खेलहरू बाँकी नै छन् ।
पछिल्लो खेलमा एथ्लेटिकोले पुछारको अलाभेसलाई १–० ले हरायो भने रियल मड्रिडले सेल्टा भिगोलाई १–३ ले हरायो । यता, बार्सिलोनाले पाँचौं स्थानको रियल सोसिडाडलाई ६–१ ले हरायो । लिग लिड एथ्लेटिकोले लिगका पछिल्ला ५ खेलमध्ये ३ खेल जितेर २ खेल बराबरी गरेको भने दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाले ५ वटामा सबै खेल जितेको छ । तेस्रो स्थानको रियलले पछिल्ला ५ मध्ये ३ खेल जितेर २ खेल हारेको छ । पछिल्लो स्थिति हेर्दा सबैभन्दा राम्रो लयमा बार्सिलोना देखिएको छ । यद्यपि, ऊ अझै पनि एथ्लेटिको भन्दा ४ अंकले नै पछि रहेको छ ।
एथ्लेटिको नहार्दासम्म बार्सिलोना र रियलको चल्दैन केही सीप !
सिजन अन्त्यतिर पुग्दै रोनाल्ड कोम्यानको नेतृत्वमा रहेको बार्सिलोना रोक्नै नसकिने वेग र लयमा देखिएको छ । तथ्यांक नै हेर्दा पनि उसले ला लिगामा पछिल्ला १८ खेलमा कुनै खेल हारेको छैन । उसले होम एन्ड अवे गरेर पछिल्ला १८ खेल खेलिसक्दा मात्रै ३ खेल बराबरी गरेको छ भने १५ खेलमा स्पष्ट जित निकालेको छ । तर, यस बीचमा बार्सिलोनाले लिगमा बलिया टोलीहरू एथ्लेटिको र रियल दुवैसँग खेलेको छैन । बार्सिलोनाको यो लय हेर्दा ऊ ला लिगा च्याम्पियन बन्ने बेग्लै तुफानी वेग र लयमा छ । त्यसै पनि, च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भइसकेको स्थितिमा बार्सिलोनाको अबको लक्ष्य र सम्पूर्ण ध्यान ला लिगा जित्नु र कोपा डेल रे कपको फाइनल जित्नु हो ।
कोपाको फाइनलमा बार्सिलोनाले ला लिगाकै एथ्लेटिक बिल्बाओको सामना गर्नेछ । यो फाइनल खेलेर उसले यो सिजनको एउपाधि रक्षा गर्न सक्छ । तर, ला लिगामा उसलाई सजिलो छैन । पछिललो समयको प्रदर्शन, नतिजा, लय र टिमको आत्मविश्वास हेर्दा बार्सिलोनालाई अब कुनै पनि टिमले हराउन सजिलो छैन । बार्सिलोना सिजनका आफ्ना हरेक खेल १०० प्रतिशत जित्ने संकल्पसाथ अघि बढेको देखिन्छ । तर, अवस्था यस्तो छ कि, उसले ला लिगा जित्न अब आफ्ना सबै खेल जितेर मात्रै पुग्दैन, लिग लिडर लिडर एथ्लटिकोले कम्तीमा दुई खेल हार्नुपर्छ ।
मानौं कि, बार्सिलोनाले आफूसँगको एक खेलमा एथ्लेटिकोलाई हराए पनि एथ्लेटिको १ अंकले अघि नै रहनेछ । त्यसपछि बार्सिलोनाको पर्खाइ भनेको एथ्लेटिको एक हार वा बराबरीको हो । एथ्लेटिको कुनै खेल हारेन वा अंक गुमाएन भने बार्सिलोना जति नै उफ्रिए पनि लिग जित्दैन । यदि एथ्लेटिको बार्सिलोनासँग हारेछ नै भने पछि उसले बाँकी खेल सबै जितेर पनि ला लिगा उसैले जित्नेछ । यता, बार्सिलोनलो दोस्रो एल क्लासिकोमा रियल मड्रिडमाथि स्पष्ट जित निकाल्न नसके एथ्लेटिकोसँग उपाधि होडमा बार्सिलोना होइन, रियल मड्रिड चाहिँ हुनेछ । तसर्थ, एथ्लेटिकालाई उपाधि होडमा रियल र बार्सिलोनामध्ये कसले टक्कर दिन्छ भनेर हेर्न दोस्रो क्लासिको मुख्य हुनेछ ।
सम्भावना यस्तो पनि हुनेछ कि– बार्सिलोनाले एथ्लेटिकोलाई जित्यो र एथ्लेटिकोले अर्को कुनै खेल हारेको वा बराबरी गरेको खण्डमा बार्सिलोनाले आफ्ना बाँकी सबै खेल जितेर उपाधि जित्न सक्छ । तर, यदि बार्सिलोना एथ्लेटिकोसँग पराजित भयो र दोस्रो इल क्लासिकोमा पनि बार्सिलोना रियलसँग पराजित भयो त्यो दिनबाट उपाधि होडमा रियल मड्रिड अघि बढ्नेछ । यदि रियलले क्लासिकोमा बार्सिलोनालाई हरायो र बार्सिलोना एथ्लेटिकोसँग पराजित भयो भने रियल मड्रिड अगाडि बढ्ने बाटो खुल्नेछ ।
तसर्थ, बाँकी खेलबाट लिग कसले जित्छ भनेर मोटामोटी निष्कर्ष निकाल्न सजिलो छैन । सबैभन्दा सहज अवस्थामा एथ्लेटिको छ । त्यसपछि बार्सिलोना अनि रियल । जब बार्सिलोना भर्सेस रियल मड्रिड र एथ्लेटिको भर्सेस बार्सिलोनाको खेल सकिन्छन्, तब मात्रै लिगको उपाधि होडबारे भन्न र अनुमान लगाउन सकिन्छ । हालकै स्थितिमा बार्सिलोना एकदमै राम्रो लय र तुफानी वेगमा त उत्रिएको छ । तर, यदि एथ्लेटिकोले बाँकी १० मध्ये २ खेलमा नहार्दासम्म जति नै तुफान आँधीहुरी सिर्जना गरे पनि बार्सिलोनाको केही चल्नेछैन । ठीक, यही अवस्था रियल मड्रिडको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
प्रकाशित मिति १० चैत्र २०७७, मंगलवार ०५:५९